Ithiyori yePythagorean: iikhonsepthi kunye nokusetyenziswa kweethiyori Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
UPythagoras waseSamos, owaziwa ngokulula njengoPythagoras, wayengumfilosofi ongumGrike kunye nesazi sezibalo esasihlala kwiminyaka engama-2.500 XNUMX eyadlulayo. Kuthiwa unoxanduva lokufumanisa kunye nokubonisa ubudlelwane phakathi kobukhulu bamacala oonxantathu abalungileyo kunye nommandla wesikwere, ephuhlise oko kubizwa ngokuba yiPythagorean Theorem, ethathwa njengenye yezona zinto zifunyenwe kwimathematika.
1 Ukuphonononga ezinye iikhonsepthi
3 Ukusetyenziswa kwengcinga kaPythagorean
Ukuphonononga ezinye iikhonsepthi
Ngaphambi kokujonga ukuba yintoni kanye kanye le nto kuthiwa yiPythagorean Theorem, masikhumbule ukuba yintoni unxantathu ofanelekileyo kunye nezinye iikhonsepthi. Landela:
Kwijiyometri, unxantathu ofanelekileyo yiyo nayiphi na unxantathu onekona elungileyo, oko kukuthi, i-engile elinganisa i-90º (degrees);
Unxantathu ofanelekileyo wenziwe ngamacala amabini kunye ne-hypotenuse. I-hypotenuse licala eliphambene nekona elungileyo kwaye lelona candelo likhulu loncantathu; Imilenze ngamacala enza i-engile elungileyo.
Indawo yesikwere ibalwa ngokuphinda-phinda ubude bamacala. Ke ngoko, ukuba icala = a, sinendawo = axa = a².
Ithiyori kaPythagorean ithi: "Kuyo nayiphi na unxantathu ofanelekileyo, isikwere sobude be-hypotenuse silingana nesibalo sezikwere zobude bemilenze."
Le theorem inokuchazwa malunga nobudlelwane phakathi kweendawo. Ke ngoko ithiyori ithi: "Nakweyiphi na unxantathu ofanelekileyo, indawo yesikwere icala liyi-hypotenuse ilingana nesixa semimandla yezikwere enamacala angamacala."
Kwingxelo yokuqala okanye yesibini ye-Pythagorean theorem, sinendlela elandelayo:
c² = b² kunye a²
apho u-c emele ubude be-hypotenuse, kwaye u-a kunye no-b bamele ubude bamacala amabini.
Ukusetyenziswa kwengcinga kaPythagorean
Njengoko besesitshilo ngaphambilana, ithiyori kaPythagorean ithathwa njengeyona nto iphambili kwimathematics. Kodwa kutheni kunjalo? Zithini izinto ezisetyenziswayo kule theorem?
Kungenzeka ukuba abukho obunye ubudlelwane bejiyometri njengaleyo isetyenziswe kwimathematics njengethiyori kaPythagorean. Umzekelo, kwiCartesian Geometry, esetyenziswa kakhulu kwiNzululwazi noBunjineli, lonke ubalo olubandakanya i-trigonometry kunye nobudlelwane bendawo basebenzise le theorem njengesiseko.